Fambolena - PADAP
Ny tetikasa PADAP dia tombony lehibe ho an’ireo miasa amin’ny sehatry ny fambolena. Noho izany dia maro ireo handray soa, anisan’izany ireo tantsaha sy ireo “Centres de Services Agricoles (CSA) na ivon-toerana misahana ny fambolena.
Ny tetikasa PADAP: manohana ny asa fambolena
Voalohany indrindra, ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny tetikasa PADAP dia hanampy ireo tantsaha amin’ny fampiasana ny teknolojia fambolena vaovao mba ahafahan’izy ireo mampitombo ny vokatra ary hiatrehan’izy ireo tsara ny voka-dratsin’ny fiovaovan’ny toetrandro.
Ankoatra izay, ny tetikasa PADAP dia hanome fanampiana ara-teknika ho fanamafisana ny fifandraisan’ireo mpisehatra amin’ny varotra, ny tambanjotra CSA ary ireo fikambanana isan-tsokajiny, amin’ny fanatsarana ny vokatra lavanila, jirofo, sakamalao, vary ary entam-barotra hafa azo amidy.
Hanome fiofanana manokana momba ny lafiny teknika sy logistika amin’ny fanangonana sy ny fanatsarana ny kalitao aorian’ny fiotazana ireo manampahaizana manokana eo anivon’ny tetikasa PADAP. Ity hetsika ity dia mikendry ny hampitombo ny fahafahan’ny tantsaha eo an-toerana sy hamaly ny fitakiana ara-indostria ary hanatsara ny toerana misy azy ireo eo amin’ny sehatry ny famatsiana.
Noho ny fiaraha-miasa amin’ny sehatra tsy miankina koa, ny tetikasa PADAP dia afaka manome tanana amin’ny fanarenana sy fananganana fotodrafitr’asa fitehirizam-bokatra sy fikarakarana ny vokatra.
Ivotoerana misahana ny fambolena: rafitra manan-danja ho an’ny tetikasa PADAP
Ireo ivon-toerana misahana ny fambolena (CSA) dia mitana andraikitra lehibe amin’ny tetikasa PADAP. Izy ireo ihany koa dia afaka manampy ny mpamokatra CSA mba hahita marimaritra iraisana hatrany ary mba tsy ho voan’ny tsindrihazolena eo amin’ny famokarana sy ny filan’ny tsena any an-toerana.
Mahazo tombony amin’ny fanampiana ara-teknika sy ara-bola avy amin’ny PADAP ireo CSA, izy ireo koa dia manatsara ny famokarana vokatra amin’ireo tontolo voafantina. Mikasa ny hampiditra zava-maniry vaovao sy maro karazana kokoa amin’ny fampiroboroboana ny teknolojia fambolena mifanaraka amin’ny toetrandro koa ireo ivon-toerana.
Noho izany, ireo CSA dia hiantoka ny fahafahan’ireo tantsaha miasa tsara amin’ny famokarana ireo santionan’ny vokatra manana ny kalitao nohatsaraina. Ireo hetsika rehetra mifandraika amin’ny fanamafisana ny fahaiza-manao ara-teknika amin’ny famokarana sy ny eo amin’ny sehatrin’ny tsena koa dia hotanterahin’izy ireo.